Xaaska Mauro Icardi oo sharad la gashay Cristiano Ronaldo – Gool FM
Xaaska Mauro Icardi oo sharad la gashay Cristiano Ronaldo
(Serie A) 04 Sab 2018. Wanda Nara oo ah xaaska iyo wakiilka Mauro Icardi ayaa ka hadashay imaatinka Cristiano Ronaldo ee kooxda Juventus xili ciyaareedkan.
Xaaska weeraryahanka kooxda Inter Milan ee Mauro Icardi ayaa fahansan in Cristiano Ronaldo uu u dagaalami doono abaal marinta gool dhalinta horyaalka Serie A, inkastoo saddexdii kulan lasoo dhaafay uusan wax gool ah dhalinin.
Wanda Nara ayaa wareysi ay ku bixisay wargeyska “Corriedellellosport” waxay kaga hadashay dareenka Cristiano Ronaldo kadib saddexdii kulan lasoo dhaafay uusan dhalinin wax gool ah.
“Waan ka war qabaa sida uu noqonayo dareenka laacibka hadii uusan wax gool ah dhalinin”.
“Waxaan doonayaa inaan arko Cristiano Ronaldo oo dhalinaya goolal kulamada horyaalka, laakiin Ronaldo haatan wuxuu caqabad xoogan kala kulmayaa kooxaha kasoo hor jeeda”.
“Inkastoo aan ka warqabo halista Ronaldo ee dhanka gooldhalinta, iyo sida uu u doonayo inuu ugu guuleysto abaal marintan, hadana Mauro Icardi ayaa ka goolal badnaan doona inta ka harsan xili ciyaareedkan”.
Juventus iyo Real Madrid oo is dhaafsanaya labadaan laacib bisha Janaayo